ကြောက်ရွံ့ခြင်း မနက်ဖြန်များ – Min Thayt
(စာအုပ်ကို ဗဟိုပြု၍ ချဲ့ကားတွေးမိသော အတ္တနောမတိများ – မင်းသေ့)
စာအုပ်အမည် – ကြောက်စိတ်နဲ့ ကလေးတို့မနက်ဖြန် (သင့်ဘဝမျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးများ)
စာရေးသူ – မောင်သစ်ဆင်း
အသိဉာဏ်နည်းပါးခြင်းတို့မှ မွေးဖွားလာသည်။ ”
ကျောင်းဆရာ မဖြစ်ချင်သည့် ကျွန်တော်က ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ စာသင်၊ စာချ (ဘုန်းကြီးစကားဖြင့်) အလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်နေမှန်း ကျွန်တော် မသိ။ နိုင်ငံရေးသင်တန်းနှင့် လူငယ်စွမ်းရည် မြှင့်သင်တန်းများကို မန္တလေးမြို့နှင့် အခြား နယ်မြို့များတွင် စာသင်ပေးနေသည်မှာ၊ ၃ နှစ်ကျော် ၄ နှစ်ထဲပင် ရောက်နေပြီ။ လူငယ်သင်တန်းတွေမှာ အမြဲ ပြောဖြစ်ခဲ့သည့် အကြောင်း အရာတစ်ခုကား၊ ကြောက်စိတ်။ လူငယ်တိုင်းလိုလို ကြောက်ရွံ့မှုစက်ဝိုင်း ထဲမှာ ကျဉ်လည်ဖူးကြသည် မဟုတ်လား။ လူငယ်မှ မဟုတ် လူကြီးများသည်လည်း ကြောက်တတ်သည်။ လူကြီးဖြစ်လာလေလေ ပိုကြောက်တတ်လာလေလေ ဟုပင် ဆိုရမလား မသိ။ ထို့ကြောင့် ကြောက်စိတ် ဟူသည် လူကြီး၊ လူငယ် မဟူ လူတိုင်းနှင့် အမြဲရင်ဆိုင်နေရသော အရာဖြစ်သည်။
လောကမှာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးစိတ်က၊ ကြောက်တတ်တဲ့ စိတ်ပဲ။
စသည်ဖြင့် သံသရာလည်နေသည်။ “ ဤသံသရာစက်ဝန်းကို ဘယ်က ဖောက်ထွက်ရမလဲ။ သူတို့ မေးတဲ့ အခါ ကျွန်တော် ဖြေလိုက်သည်။ လုပ်ပစ်လိုက်။ ကြောက်သလား။ ကြောက်ကြောက်နှင့်သာ လုပ်ပစ်လိုက်။ မင်း မကြောက်တတ်ဘဲ ဖြစ်လာမယ်။” နောက်တော့ ကျွန်တော် ထပ်ပြောသည်။ “သတ္တိရှိသူ ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ” “သတ္တိရှိသူဆိုတာ သူများထက် ငါး မိနစ် နောက်ကျပြီးမှ ကြောက်တဲ့သူကို ခေါ်တာ” စသည်ဖြင့် ကျွန်တော် ပြောသည်။ “သတ္တိဆိုတာ မိုက်ရူးရဲတာ မဟုတ်ဘူး။ မိုက်ရူးရဲတာနဲ့ သတ္တိက မတူဘူး၊ ဉာဏ်နှင့်ယှဉ်တဲ့ ရဲရင့်မှု ကသာ သတ္တိဖြစ်တယ်၊ ဉာဏ်မပါတဲ့ ရဲဝံ့မှုက မိုက်ရူးရဲတာပဲ…”
ကျော်ဝင်း၊ တင်မောင်သန်း (သင့်ဘဝ)၊ ကိုတာ နှင့် မောင်သစ်ဆင်း တို့ အုပ်စုကြောင့် ကျွန်တော် ထောင့်ပြောင်းတွေး တတ်သည့် သီအိုရီ အတော်များများရခဲ့သည်။ ယခုလည်း ဆရာကြီးများနှင့် မကြာခဏ တွေ့ဆုံ၊ စကားပြော ဆွေးနွေးရင်း၊ လေ့လာဆည်းပူးခွင့်ရနေသည်။ ကျွန်တော် ပီတိဖြစ်ရသည်။ အတွေးဘောင်ထဲကနေ ကျောက်ချ မထားဘဲ၊ ကိုယ့်ကြက်ဥခွံထဲကနေ ဖောက်ထွက်ဖို့ ဆရာကြီးများ၏ စာများက ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့် အသိကို ကိုယ်တော်လှန်ရေး လုပ်တတ်သည့် အကျင့်ပါ ကျွန်တော် ရလာသည်။
မောင်သစ်ဆင်းက၊ ကြောက်စိတ် ဆောင်းပါးများကို စစ်အစိုးရခေတ် စာပေကင်ပေတိုင်များကို လွတ်အောင် ရှောင်ရင်း တိမ်းရင်း ရေးခဲ့သည့် စာများဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရဖိနှိပ်မှု ဩဇာကနေ ဖောက်ထွက်နိုင်အောင်၊ သင့်ဘဝ၊ စံပယ်ဖြူ၊ မိုး၊ အတွေးအမြင်၊ The wave စသည့် စာစောင် မဂ္ဂဇင်းများက တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားခဲ့ သည်။ ယခု အတော်များများပင် နားသွားပြီ။ ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းလှသည်။
ကလေးတွေကို ဘာဖြစ်လို့ ကြောက်အောင် လုပ်တတ်ကြသလဲ ဆိုတော့ လူကြီးတွေ ကိုယ်နှိုက်က ကြောက် အောင် အလုပ်ခံခဲ့ကြရလို့ပါ။ သူတို့ ကိုယ်နှိုက်က ကြောက်စိတ်တွေ ရှိနေလို့ပါ။ (ကောက်နုတ်ချက် – စာ/၄၅)
ကိုယ်ကျိုးစီးပွားနှင့် ပိုပက်သက်လေလေ၊ ပိုကြောက်တတ်လေလေ၊ ပိုစိုးရိမ်တတ်လေလေ။
အများက မိုးခါးရေသောက်၍ ကိုယ်ပါ လိုက်သောက်လိုက်ရသည့်အဖြစ်၊ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ကြည့်။ ငါ ဖြစ်ဖူး လား။ သမာရိုးကျ၊ အစဉ်အလာ၊ အုပ်စုစွဲ စသည့် စကားလုံးများကို သင် နက်နက်နဲနဲ ဆင်ခြင်ဖူးပါသလား။
Comfort Zone ထဲမှာ၊ အနေကြာကြာနေကြရင်ဖြင့် ဝါးလုံးခေါင်းထဲက လသည် အမြဲသာနေပေလိမ့်မည်။ ဆရာတော် ဦးဇောတိက ကပြောဖူးသည်။ မစွန့်စားတဲ့သူက မတိုးတက်ဘူး… တဲ့။
“ရှက်တတ်ပါ။ လူဆိုတာ ရှက်တတ်မှ အောင်မြင်တယ်၊ တိုးတက်တယ်လေ… လူတွေ မတိုးတက်တာ၊ ရှက်ရ မယ့်နေရာ လွဲနေလို့ပါ…. မရှက်သင့်တာကို ရှက်ပြီး ရှက်သင့်တာလို့ မရှက်လို့ လူတွေ နိမ့်ကျရတာ….”
(၃) လိမ္မော် / အစိမ်း ပုပ် / ကြက်သွေး-ပန်းရောင် / မိုးပြာ-နက်ပြာ- ခရမ်း (ရောင်ကွဲ အဆင့်)
(၄) အလင်း / အမှောင် အဆင့် (ပေါက်မြောက်သော ပန်းချီဆရာများသည် အရောင်များဟု မမြင်တော့ အလင်း အမှောင်များဟုသာ မြင်တော့သည်၊ အလင်း လှိုင်းများ ပြောင်းလဲခြင်းမှသည် အရောင်များ ကွဲပြားဖြစ်တည်လာသည်ဟု မြင်သည့် အဆင့် တနည်း အရောင်နတ္ထိဝါဒီ အဆင့်/ အဆင့်အမြင့်ဆုံး အမြင်)
မြန်မာတို့ အဖို့ အဖြူ / အမည်း အဆင့်ကပင် မတတ်သေး။ ဘက်စုံ မမြင်။ ထောင့်ပြောင်းမမြင်။ ကျော်လွှား မမြင်။ နေရာရွှေ့မကြည့်။ ကန့်သတ်အမြင်များဖြင့် တိမ်သလာ ဖုံးနေသည်ချည်း။ အချို့က ကာလာဗလိုင်း၊ အချို့က ပုံသဏ္ဍာန် ဗလိုင်း။ အချို့က အဝေးမှုန်၊ အနီး မမြင်။ အချို့ အဝေးမှုန် အနီးမြင်။ အချို့က အဝေးမြင်၊ အနီးမှုန်။ အနည်းစုကသာ အဝေးမြင်၊ အနီးမြင်။ နောက်ဆုံး မျိုးစိတ်ကား ရှားပါး မျိုးစိတ်တည်း။
၂၁ ရာစုသည် မသေချာ၊ မရေရာ၊ ရှုပ်ထွေးလှ၏။ စိန်ခေါ်မှု၊ စွန့်စားမှု၊ မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် နင်းကြမ်းပြည့်နေ၏။ ၂၁ ရာစု ကလေးများအား ကျောင်းသင် ပညာရေးက
ဆိုရှယ်လစ် လူဘောင်မှာ ကြီးပျင်းလာသည့် လူကြီးများအဖို့၊ “အ” သုံးလုံး ဆိုသည်မှာ “အရေး၊ အဖတ်၊ အတွက်” ဟုသာ ထင်နေ၊ မြင်နေသရွေ့ စတုတ္ထမျိုးဆက်အဖို့….
ဂလိုဘယ် “အ” သုံးလုံး ကျေမှ ၂၁ ရာစုမှာ လူရာဝင်မည်။ လူတောတိုးမည်။ လူဝင်ဆန့်မည်။ နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မည်။ ခေတ်သစ် “အ” သုံးလုံးမှာ…. အိုင်ဒီယာ၊ အင်တာနက်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ တို့ဖြစ်သည်။
မြန်မာသည် တော်ဖလာ ဟောသည့် ပထမလှိုင်းထဲမှာပင် တဝဲလည်လည် သံသရာ ရှည်နေရအုံးမည်။ ကျဉ်လည် နေရအုံးမည်။ တော်ဖလာက စီးပွားရေး ထုတ်လုပ်ပုံအပြောင်းအလဲကို ကြည့်ပြီး လှိုင်း (၃) လှိုင်းဖြင့် ပုံဖော်သည်။
ပထမလှိုင်း – လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး ယဉ်ကျေးမှု (၈၀၀၀ ဘီစီ မှ အေဒီ ၁၆၅၀ – ၁၇၅၀ အထိ)
ဒုတိယလှိုင်း – စက်မှု ယဉ်ကျေးမှု (၁၆၈၀ မှ ၁၉၈၀ အထိ)
တတိယလှိုင်း – အာကာကခေတ်၊ သတင်းခေတ်၊ အီလက်ထရောနစ်ခေတ်၊ စက်မှုခေတ်လွန် (ယခု)
Tagged Book Review, Child Psychology, Fear, Myanmar Book Review, Reading
Previous post လူ့သမိုင်း
Next post ရီနေးဆန့်